आज हामी सुसज्जित क्सीनन प्रकाशिकी संग कार को धेरै देख्न सक्छौं। रूपमा क्सीनन दीपक एक उज्जवल आभा उत्पादन यो, एक एकदम लागत-प्रभावकारी उपाय हो। तर, धेरैले मोटर चालकहरुलाई आफ्नो हेडलाइट्स मा चिह्नों विचार र यो धेरै क्सीनन लागि यातायात जरिवाना को मंच मा छलफल। यी मुद्दाहरू हेरौं।
उद्देश्य मा लेबल रोशनी रूपमा?
आज हरेक मोटरहाक्ने व्यक्ति कार हेडलाइट्स अलग अप्टिकल सिस्टम साथ सुसज्जित थाह छ। यहाँ छुट्टाछुट्टै अलग र टाढा डूबा। पनि प्रयोग र एकल आवास दुवै प्रकारका संयुक्त जुन प्रणाली संयुक्त प्रकाश को। यी दीपक अन्य उद्देश्यका लागि लेबल गरिएका छन्।
सी - कम headlamp बीम।
आर - रूपमा उच्च बीम द्वारा संकेत गर्नुभयो।
सीआर - एक संयुक्त प्रणाली।
एक - पार्किङ रोशनी।
बी - विरोधी-कुहिरो रोशनी।
सुविधाहरू र उद्देश्यका मा अंकन यो बाहेक, त्यहाँ मोटर चालकहरुलाई लागि धेरै रोचक र उपयोगी जानकारी सङ्केतन जो अन्य लक्षण, छन्। उदाहरणका लागि, विशेष चासो ज्योति स्रोत, जो दीपक संचालित गर्न सकिन्छ designating अक्षरहरू योग्य हुनुहुन्छ।
एक सर्कल मा संलग्न पत्र - अन्तर्राष्ट्रिय पद हो। यस साइन इन, तपाईं रोशनी को प्रयोग अनुमति जो देश को कोड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यी संकेत सजिलै हेडलाइट वा लेन्स मा या त पत्ता लाग्यो गर्न सकिन्छ। अक्सर अंकन (कार ग्लास) यो हानि बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ के रोशनी बारेमा बहुमूल्य जानकारी धेरै दिन्छ।
अमेरिका, कुनै पनि ओप्टिक्स संकेत चिन्ह लगाइएको डट। यो पद बाहेक, लेबलिंग लक्स मा रोशनी को स्तर, साथै तीर आन्दोलन को दिशा बारे भन्छन्। को headlamp LHD कार प्रयोगको लागि अभिप्रेरित गरिएको छ भने, अंकन मा त तीर छैन हुनेछ। यो पनि सही-हात ड्राइव कार अनुपस्थित हुनेछ। तीर दुवै पक्ष चिनो लगाइएको भने यो एक सार्वभौमिक अप्टिकल यन्त्र हो। अंकन प्रतीक बीच तपाईं पत्ता गर्ने र कहाँ यो रोशनी गरे गर्न सक्नुहुन्छ।
यी डाटा ग्लास रोशनी को भित्र मा देख्न सकिन्छ। अर्को अंकन कार Windows इन्जिन कक्ष मा, माथि निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ। प्रायजसो, यी डाटा धेरै गाह्रो हेर्न। गर्न यो ओप्टिक्स हटाउन आवश्यक हुनेछ।
अर्को अंकन मानक कम बीम लागि लेबलिंग पद कोण लागि प्रदान गर्दछ। प्रायजसो, यो कोण बारेमा 1% हुन सक्छ। यी डाटा एकाइ रोशनी को लेबल मा देख्न सकिन्छ।
प्रकाश स्रोतहरु को अंकन दायरा
यो अप्टिकल प्रकार वा मोटर वाहन प्रणाली दुई लोकप्रिय प्रकार थाहा लायक छ। यो हलोजन दीपक र क्सीनन प्रकाश स्रोतहरु।
मानक र परिचित प्रत्येक मोटरहाक्ने व्यक्ति रोशनी, हलोजन दीपक को प्रयोगको लागि डिजाइन, प्रतीक एच हलोजन प्रकाश धेरै embodiments मा कन्फिगर गर्न सकिँदैन द्वारा संकेत गर्नुभयो। तर, यो बाबजुद विसारक यो प्रतीक चिनो लगाइएको हुनुपर्छ। यो ड्राइभिङ लागि कोर्ट र मानव संसाधन बीम लागि हुन सक्छ। तिनीहरूले आफ्नो साथीहरूको बीचमा आगमन चालक र विश्वसनीय मद्यपानोत्सव छैन किनभने यस्तो रोशनी, सबैभन्दा सुरक्षित को एक हो। हो, र एक लागत मा तिनीहरूले क्सीनन लेन्स भन्दा धेरै सस्ता छन्।
के क्सीनन हेडलाइट्स अंकन?
यी हल्का स्रोतहरू हलोजन प्रकाश को लागि अभिप्रेरित headlamps को मामला मा रूपमा प्रतीक डी द्वारा पहिचान हो, पदनाम पनि फरक हुन सक्छ। यो ड, या त डीसी वा DCR या त हुन सक्छ। वर्तमान स्तर र नियमहरु अनुसार, यो तरिका लेबल गरिएका छन् जो दीपक मात्र दीपक, सी, आर या सीआर मा स्थापित गर्न सकिन्छ।
केही वाहन मा, अमेरिकी वा जापानी मूल अंकन हुन सक्छ HB4 / D1R SAE- (2) मानवअधिकार AIPP2-03-NR डट VOR आरएच NWS। यहाँ तपाईं परिचित प्रतीक डी र एच ओप्टिक्स कस्तो र कसरी यो अंकन decipher गर्न देख्न सक्छ?
तथ्यलाई युरोपेली कार प्रतीकको ई र नम्बर हो भन्ने छ। आंकडा - जहाँ कार उत्पादन भएको थियो देश को एक प्रतीक।
अमेरिकी कार आफ्नो वर्गीकरण र प्रतीक एचबी आंकडा मा छ। यी मान सम्भव बाहिर दीपक आधार प्रकार र डिजाइन फेला पार्न। निस्सन्देह, यो अमेरिकी बजार को लागि मात्र सान्दर्भिक जानकारी छ। उदाहरणका लागि, दीपक एचबी 2.4 - यो डबल-असहाय दीपक जस्तै केही छ। र यदि संख्या 1 र3थिए, त्यसपछि यसलाई एक-असहाय दीपक हुनेछ। साथै, तिनीहरू दुवै कुनै हलोजन दीपक र क्सीनन छ।
यो अंकन रोशनी मात्र प्रतीक डी द्वारा denoted क्सीनन कि सम्झना गर्न आवश्यक छ
क्सीनन र व्यवस्था बारे
पहिले नै स्पष्ट कुरा। तथापि, तपाईं अर्कोतर्फ अंकन को मुद्दा हेर्न हुँदैन। एक ट्राफिक प्रहरी पोस्ट मा तपाईं रोकियो छन्, तर निरीक्षक को लेबलिंग मा मानक वर्ण थाहा छैन कल्पना गर्नुहोस्। उनले आफ्नो अप्टिकल उपकरणहरू राज्य स्तर पूरा नगर्ने रिपोर्ट लेख्छन्।
के गर्ने? तपाईं एक रक्षा निरीक्षक अंकन डाटा हेडलाइट्स, साथै दीपक देखि प्रतीक देखाउन सक्छौं। मुख्य ओप्टिक्स लागि कुनै पनि चिम को headlamps मा जस्तै चिह्नों हुनेछ। यसरी, कार Windows अंकन को दीपक मा वर्ण द्वारा डाटा वर्ण मेल हुनुपर्छ।
तर, निरीक्षक शान्त भएन। र किन? र ट्राफिक प्रहरी मान्यता, नियम र आवश्यकताहरु एक फरक प्रणाली अपनाए किनभने। उदाहरणका लागि, पूर्ण कार मा अप्टिकल उपकरणहरू प्रयोग, साथै आफ्नो काम को मोड regulates एक कागजात छ। पनि यो कागजात असामान्य अवस्थामा ओप्टिकल उपकरण सञ्चालन गर्न निषेधित छ। यो छ र दोकान गरिनेछ।
मोटर चालकहरुलाई किन बेच्न गर्नुपर्छ प्रकाश बल्ब, भविष्यमा जसको लागि राम्रो भुक्तानी गर्न हुनेछ? यसलाई सरल छ। यी दीपक बस सही हेडलाइट स्थापित गर्न छ।
ओप्टिकल ड्राइव हलोजन प्रकाश को लागि डिजाइन गरिएको छ भने, त्यसपछि रोशनी अन्तर्गत लेबलिंग जो क्सीनन, यो अवैध हो। तर ग्लास को अप्टिकल सिस्टम प्रतीकको डी छ भने, त्यसपछि मात्र तपाईं सुरक्षित क्सीनन प्रकाश स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं कडा लोकप्रिय र फैशन कार क्सीनन रोशनी पूरक गर्न चाहन्छु, तर यस मामला लागि रोशनी उपयुक्त छैन भने, त्यसपछि त्यहाँ एउटा मात्र विकल्प छ। यो क्सीनन लागि उपयुक्त सम्पूर्ण प्रकाशिकी को प्रतिस्थापन आवश्यक छ। यो यस्तो उपकरण भने बिक्री को लागि उपलब्ध छ, सम्भव छ। तर यो कार को सबै ब्रान्डहरु लागि अवस्थित छैन।
प्रकाश क्सीनन केही nuances
यदि तपाईँको कार रोशनी क्सीनन दीपक द्वारा चिनो लगाइएको छ र कारखाना मा nominally सेट, तपाईं अझै पनि तिनीहरूलाई केही समस्या को पकड प्राप्त गर्न सक्छन्। यहाँ बिन्दु एक विशेष स्वतः corrector र एक उच्च दबाव मा एक वशर छ, यो चिन्ह लगाउनका साथै अझै पनि आवश्यक ओप्टिक्स छ भन्ने छ।
तर तपाईं यो उपकरण बिना गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी कि प्रदर्शन अझै पनि जाँच गर्न आवश्यक छ। तर, निरीक्षण चमक छ भने, लामो र कठिन कार एक nominally यी उपकरणहरू छ भनेर प्रमाणित गर्न काम गरेको छ।
किन हेडलाइट्स विशेष कडे आवश्यकताहरु आयातित क्सीनन गर्न?
यस मामला मा, सबै कारण दीपक क्सीनन धेरै उच्च चमक प्रकाश प्रवाह गर्न। हामी जो मामला मा एक हलोजन प्रकाश, लिन भने लहर लम्बाइ क्सीनन दीपक भन्दा एकदम सानो छ।
यो बराबर वर्गहरूको र लेन्स को खुरदरापन मा, जेनोन दीपक एक धेरै ठूलो कोण अपव्यय छ कि सुझाव। यो विज्ञान पुष्टि भएको छ। क्सीनन रोशनी अन्तर्गत ग्लास कुनै अंकन भने, यो प्रकाश अन्य सडक प्रयोगकर्ता मद्यपानोत्सव गर्न सक्नुहुन्छ। यो हल्का रमाइलो गर्न र जो कोहीले असुविधाको छैन क्रममा, यो एउटा उच्च reflectivity र विशेष ग्लास छ जो विशेष reflectors, उपस्थिति आवश्यक छ।
यी दीपक मा छुट्टी पनि हलोजन प्रकाश को भन्दा उच्च छ। यो पनि फैलिएको कोण बढ्छ। सानो फोहोर वा धूल लेंस वा reflectors, वा ओप्टिक्स रोशनी को गलत सेटिङ लागि पनि अन्य चालक मद्यपानोत्सव हुनेछ।
यो उज्यालो प्रकाश कि चालक राम्रो सडक हेर्न अनुमति दिन्छ, उहाँले अन्धकारमा एक उत्कृष्ट सिंहावलोकन हुन्छ। तर आगमन कार को चालक पनि खुसी हुने छैन, र अझै यसलाई सडक दुर्घटना को जोखिम बढाउन सक्छ।
तसर्थ, क्सीनन हेडलाइट्स संग संघर्ष। तर, सबै एक पंक्ति मा, तर केवल जहाँ उज्यालो अवैध स्थापित छ र ती ग्लास क्सीनन को अंकन अनुरूप छैन।
कुहिरो रोशनी र क्सीनन
कुहिरो दीपक क्सीनन पारंपरिक ओप्टिक्स भन्दा सजिलो चढाउनुहोस्। यहाँ, सबै कुरा सजिलो छ। तर मनमा राख्न ज्योति उत्पादन आवश्यक अलिकति तल निर्देशित थियो।
यो मिलाउने पारंपरिक हलोजन प्रकाश संग तुलना रूपमा फाइदा छ। तसर्थ, उज्यालो सतह क्षेत्र, curb को राम्रो दृश्य वृद्धि। यो धेरै महत्त्वपूर्ण cornering गर्दा, यो roadside छ किनभने, त्यहाँ केही जोखिम हो। स्थापित क्सीनन हेडलाइट कुहिरो रोशनी यो सत्य यो प्रतिक्रिया छ अघि अवरोध हेर्न चालक सक्षम गर्नुहोस्।
कुहिरो दीपक प्रयोग plinths h3, H11, HB4, H27 टाइप छन्। कम बारम्बार दीपक सकेट H4। को अंकन आधार स्पष्ट गर्न, यो रोशनी जाँच्न आवश्यक छ। तपाईं ग्लास मा प्रतीक फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि यसलाई आवश्यक कुहिरो ओप्टिक्स हटाउन छ।
कुहिरो दीपक मा दीपक को विकल्प मा
छनौट क्सीनन PTF, तपाईं इष्टतम तापमान अवस्था बाहिर आंकडा पर्छ। सर्वोत्कृष्ट विकल्प - 4300 K. यो दीपक पहेंलो रङ्ग संग सेतो रंग दिन्छ। अर्को प्रयोग 5000 K. को तापमान मूल्य संग कुहिरो-दीपक यस मामला मा रोशनी हुनेछ पनि सेतो। अझै पनि 6000 K. यो फेरि अलिकति नीलो रङ्ग संग सेतो ज्योति हो को एक तापमान संग दीपक लागू हुन्छ।
कुहिरो दीपक लगाइँदै
निम्नानुसार यो ओप्टिक्स coded छ:
यदि यो एक अलग एकाइ मा बनाएको छ टर्च बीम, - सी।
आर - मुख्य बीम, यदि यो अलग स्थापित छ।
एच - हलोजन दीपक।
PL - दीपक, लेन्सको अप्टिकल प्लास्टिक बनेको छ।
एस - एक गिलास दीपक।
व्यापार को चाल
यो outwit गर्न निरीक्षक काम गर्ने छैन जस्तो देखिन्छ। तर यो मामला छैन। त्यहाँ चाल लागि ठाउँ छ। क्सीनन यी मापदण्डहरू हुनु पर्छ लागि headlamps मा अंकन 4000 K. द 3000 को एक तापमान संग दीपक आवश्यक छ।
अझै पनि ओप्टिक्स विस्थापन वा यसलाई मा लेन्स सेट गर्न आवश्यक छ। लेन्सलाई पनि बिखरे प्रकाश बीम अनुमति छैन। तर चमक कम। लेन्स निरीक्षक चिह्नों र दीपक को आकार को आँखा बाट लुकाउँछ। पनि एक पेशेवर निरीक्षक निर्धारण गर्न जो आफ्नो प्रकाशिकी मा GOST अंकन सक्षम हुने छैन।
पनि ज्वलन ब्लक बारे मा भूल छैन। यसलाई दूर लुकेको हुन आवश्यक छ। व्यवसायीक र तर्क हुनत हलोजन प्रकाश तुलनामा ठूलो चमक कि हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
तपाईं हलोजन प्रकाश क्सीनन प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी संग कुनै समस्या थिए निश्चित गर्नुहोस्। लगाइँदै कहिलेकाहीं विशेष गरी यसलाई अहिले बजार को बहुमत जो प्लास्टिक हेडलाइट्स, मा बन्द मालिश धमिलो। तपाईं आफैलाई अंकन चश्मा मा जो धेरै राम्रो तरिकाले देखिने एक तस्वीर रक्षा गर्न सक्छन्।
क्सीनन किन्नुहोस सही
भनेर बुझ्न वाहन उपकरण आवश्यकता स्थापित गर्दा सबैभन्दा महंगा प्याकेज ठीक र कुशलतापूर्वक काम गर्नेछ सधैं छ। धेरै उत्पादन, विशेष गरी महंगा, विज्ञापन को लागत समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई लागि भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन।
ज्वलन एकाइ यो मिसिन को डिजाइन गर्न फिट यस्तो तरिकाले चयन हुनुपर्छ। आफ्नो वाहन को दीपक भोल्टेज नियन्त्रण गर्ने एक मोड्युल सुसज्जित छ भने, त्यसपछि trompe-d'oeils संग क्सीनन किन्न। यो ठूलो बचत गर्न अनुमति दिन्छ।
साथै, एक सेट छनौट, यो आवश्यक छैन पातलो ब्लक प्राप्त छ। हुड अन्तर्गत पर्याप्त ठाउँ छ र ब्याट्री को अंकन अनुमति दिन्छ भने, त्यसपछि हामी सुरक्षित मानक आकार को एक ब्लक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
नियमित हेडलाइट्स मा लेन्स स्थापना गर्दा लेन्स को सतह बिगार्न छैन महत्त्वपूर्ण छ। औंलाहरु प्रकाश फैलिएको भविष्य गुणस्तरमा देखि धेरै कम हुनेछ यो अत्यन्तै खराब छ छुनुहोस्। यद्यपि, यो सतह धूलो र माटो उजागर हुँदैन, अनि विधानसभा पछि सही प्रक्रिया ग्लास जडान कुनै पनि सीलेंट ब्लक स्थानहरू।
उल्टो मा क्सीनन प्रकाश
को रियर रोशनी मा प्रकाश को उपस्थिति एकदम राती आन्दोलन र Maneuvers सुविधा सक्नुहुन्छ। चयन गर्दा 5000 भन्दा कम K. छैन को एक आभा तापमान संग दीपक प्राथमिकता दिनुपर्छ यो एक उज्ज्वल हासिल गर्नेछ सेतो प्रकाश एक bluish tinge संग।
सुरुमा, तपाईं नकारात्मक विच्छेद गर्न आवश्यक केबल। लगाइँदै ब्याट्री को यहाँ गल्ती गर्न अनुमति छैन। काम सुविधा गर्न, तपाईं भित्री बुट ट्रिम हटाउन आवश्यक छ।
क्सीनन स्थापना taillights को दीपक र आफ्नो पछि disassembly हटाउन आवश्यकता implies। पुरानो दीपक तुरुन्तै loosen गर्न सक्नुहुन्छ। र क्सीनन रोशनी रङमा पिल पिल उल्ट्याउन गर्न, तपाईं केही सुधार गर्न आवश्यक हुनेछ। सामान्यतया, तपाईं ताराहरु ठाउँ तयार गर्न आवश्यक छ।
पछाडिको रोशनी rework आधार आवश्यक छैन, अन्यथा तपाईं त आफ्नो ठाउँमा एक मानक बल्ब मा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। क्यासेट बुझ्नुहुन्छ र सम्पर्क र तार बाहिर निकाल्न आवश्यक छ। प्रकाश क्सीनन लागि ताराहरु को प्वाल मार्फत बाहिर गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि, दीपक सुरक्षित हुनुपर्छ। लागि connectors साधारणतया किरा संग आपूर्ति। जडान polarities संग सख्त अनुपालन मा प्रदर्शन हुनुपर्छ। यहाँ हामी धेरै होसियार हुनुपर्छ। को Clamps संग, तपाईं ज्वलन एकाइ गर्न तार जडान गर्नुपर्छ।
परीक्षण गर्नु अघि, त्यहाँ सर्किट मा एक फ्यूज छ कि निश्चित गर्नुहोस्। तपाईं संकलन गर्न सक्छौं एक पटक पुच्छर रोशनी सबै फिर्ता सुन्दर क्सीनन प्रकाश उजाला।
क्सीनन को डर छ?
ओप्टिक्स क्सीनन - एकदम परिष्कृत यन्त्र। तिनीहरूलाई को डिजाइन नाजुक धेरै र हलोजन दीपक डिजाइन भन्दा नाजुक।
यी बल्ब र चक्र बन्द बारम्बार गर्न डराउँछन्। प्रकाश स्रोतहरु उच्च तापमान छुट्टी द्वारा संचालित। कहिले काँही उनि अचानक बाल्न सक्नुहुन्छ। फलस्वरूप, तपाईं आभा हरियो वा रातो रंग हेर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, क्सीनन अत्यधिक कम्पन पर्दाफास छैन। कम से कम एक मिनेट depressurization यस्तो emitter तत्काल असफल। साथै, विवाह बक्स बाहिर पूरा गर्न सक्छन्। अक्सर यो क्सीनन दीपक को सस्ता मोडेल मा हुन्छ। आफ्नो सेवा जीवन एक हप्ता भन्दा कम हुन सक्छ। त्यसैले, तपाईं मात्र ब्रांडेड उत्पादनहरु किन्न गर्नुपर्छ। तर फेरि, यो सस्तो छ।
राख्न वा राख्नु छैन?
खातामा यो जानकारी लिएर, त्यसैले हल्का अनुमति छैन। मात्र कुरा कुनै लेबलिंग क्सीनन हेडलाइट्स छ वा तिनीहरू सही तरिकाले कन्फिगर छैन जहाँ तपाईं एक मोडेल प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर।
त्यसैले, हामी चिह्नित क्सीनन हेडलाइट्स फेला परेन।
टायर Nokian Hakkapeliitta R2: मालिकको समीक्षा
GAZ-M21: प्राविधिक विनिर्देशों, फोटो
विभिन्न कार मोडेल मा खेल निकास प्रणाली
अश्वशक्ति कार पासलाई निर्दिष्ट कति र कुन आफ्नो वास्तविक नम्बर
सेन्सर प्रशंसक के हो र यो कसरी काम गर्छ?
सानो बेडरूमको डिजाइन: कोठाको दृश्य वृद्धि
काला सागर तट - सबै भन्दा राम्रो छुट्टी
रासायनिक तत्व के हो? प्रणाली र रासायनिक तत्व को विशेषता
"अर्लिन्स" phantasmagoric प्रवचन। चलचित्र समीक्षा diametrically विरोध जुन